Akhriso War-murtiyeed laga soo saaray shirkii Dhuusamareeb | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Akhriso War-murtiyeed laga soo saaray shirkii Dhuusamareeb
Shirkii madaxweynayaasha Dowlad-gobolleedyada dalka ee labo maalin ka socday magaalada Dhuusamareeb ayaa goor dhow warmurtiyeed laga soo saaray.
Warmurtiyeedka oo ka kooban shan qodob, ayaa hoggaamiyeyaasha waxaa ay ku baaqeen wadatashi laga yeesho nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa, maaddama sida ay sheegeen aysan xilligan waqtigeeda ku dhici karin doorasho qof iyo cod ah.
Wajiga labaad ee shir lagu ballamay inuu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb , ayay ku baaqeen inay ka soo qeybgalaan Madaxweynaha Dowladda Federaalka iyo Ra’iisul Wasaaraha, balse lama muddeyn xilliga.
Hoos ka akhri warmurtiyeedka;
5. Shirku wuxuu ka mahad celinayaa taageerada Beesha Caalamka ee ay la garab taagan tahay dhismaha Dowladnimada Soomaaliya
Akhriso War-murtiyeed laga soo saaray shirkii Dhuusamareeb was last modified: July 13th, 2020 by Admin
Akhriso+Sawiro:-Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Dalka oo Daah-furay Qorshaha Gobalka Banaadir Ee Xal u Helidda Barakacayaasha